PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-11 - Uphange ukudla wakhingceka wafa
Uphange ukudla wakhingceka wafa
Isolezwe ngeSonto - 2018-11-11 - IZINDABA/EZINGAJWAYELEKILE -
UPHELE sekumuncu umncintiswano wokuphanga obuse-Argentina ngesikhathi indoda eyayingushampeni wesibhakela ibindwa ukudla yashona.
Umncintiswano wokuqhudelana ngokuthi ubani ongadla ukudla okuningi akusheshise adlule abanye, unesasasa kuleli zwe kuphuma nesinedolo.
UMario Melo kuthiwa ubezethemba ukuthi angaba wugimba abehlule bonke abanye abebengenele. Kuthiwa kodwa ubonakale ebitoza, ehefuzela, ekweqa kwacaca ukuthi sengathi uyabindwa lo mbhemu owayeshaya iqupha elinenkosi phakathi.
Kuthiwa kubekwa ukudla okuthiwa icroissants bese kuthiwa kufanele ukuqede ngomzuzu owodwa. Kuthiwa ngesikhathi ebindwa kuphuthume inqwaba yamadoda ezama ukumhlenga kwasho ukuthi asindwe zinyawo ishoba lalala amazolo. Kuthiwa udokotela ohlole le ndoda uthole ukuthi ibindwe kumgudu wayo wokuphefumula ongenwe ukudla.
Umuntu obethamele umqhudelwano, uthi kube yisigameko esibuhlungu.
“Le nto yenzeke phambi kwabantu abaningi bebuka, kukhona nemindeni ebihamba nezingane zabona umuntu efa kabuhlungu,’’ kuchaza lo ozibonele.
Kuthiwa umufi ubememeza ethi ucela amanzi kodwa abengekho eduze. Omunye osebenza kwabosizo lokuqala uthi kwake kwenzeka ingane yabindwa ukudla phambilini kulo mncintiswano kodwa yaluthola usizo wathi kukhona okungahambanga kahle ngesikhathi kuxilongwa leli bhokisa. – The Daily Mail
LIKHINCWE ukudla lafa ibhokisa ebelingenele umncintiswano wokudla e-Argentina Isithombe: THE DAILY MAIL